Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- बलात्कार ! बलात्कार !! बलात्कार !!! (विचार)
के म बलात्कारी हुु ? के म शोषक हु ?
के म बलात्कृत हु ? के म शोषित हुु ?
हामी को छौँ ? आखिर को छ बलात्कारी र शोषक हामी छैनौँ भने ? के हामी बलात्कृत र शोषित छौँ ? अनि हामी बलात्कृत र शोषित छैनौँ भने हरेक पल बलात्कृत र शोषित को हुुदैछ ? मेरो प्रश्न छ हरेक आम जनतादेखि लिएर त्यो सम्पूर्ण सत्ताको चुुचुुरोदेखि लिएर तलको कुुर्सी समातेकाहरु, समानताका लागि कानुुनको हथौडा समातेको छ, अनि कलमदेखि कोदालो समातेको छ । एक चोटि आफ्नो आत्माबाट सोधौँ हामी को हौँ ? मलाई त आजभोली अचेल हरेक मान्छे नै बलात्कारी देखिन्छ ।
किनकी हरेकको अाँखामा मलाई समान तृष्णा देखिन्छ । सबैको आँखा राता राता नाशामा चुुर भएको छ । सब आफ्नो मनको दमित कामवासना लिएर दौडिएको छ । कोही धनको लागि, कोही पैसाको लागि, कोही सम्मानको लागि, कोही इज्जतको लागि, कोही नाम, कुुर्सी, सत्ता त कोही शरीरको संवेदनशील अङ्गको आगो बुुझाउन, कामाच्छेक ¥याल चुुहाउँदै पागल गोरु जस्तै दौडेको छ ।
मलाई त यहाँ मानव कम र रेसको घोडा बढी देखिन्छ । रेसको घोडालाई केही मतलब हुुदँैन, मात्र आफ्नो गन्तव्य पाउने उद्देश्य हुुन्छ । चाहे छेउछाउ वा बिच बाटोमा कोही किल्चिएको छ कि कसैको ज्यान गएको छ त्यो घोडालाई कुुनै मतलब हुँुदैन । तसर्थ यहाँ हरेक मान्छे कुुनै न कुुनै कोणबाट सब अरुको बलात्कार गरेकै छ ।
नेताले कुुर्सीको आडमा वर्षौदेखि राजनीतिका यति बलात्कार गरेछ कि विचरी राजनीतिको हात कहाँ छ, खुुटा कहाँ पुुगेछ ठेगान छैन । विचरी आफ्नो फरिया पनि उठाउँने अवस्थामा छैन । त्यसपछि न्यायकर्मीहरु आदालत र कानुुनको पनि त्यही हाल गरेछ । न्याय कि देवी जति असहाय र पीडित त सिंगो नेपालको महिला के संसारकै महिला भन्ने हो भने कम छ । छोरा, श्रीमान आफन्त दिनरात भ्याइनभ्याई बलात्कार गरेको छ । त्यसपछि स्वास्थ्य पनि कहाँ बाँच्नु, ती पनि आफ्नै छोराबाट बलात्कारमा परेछिन् ।
स्वास्थ्य जति असहाय त व्रह्माण्डमै कोही नहोला । डाक्टरलाई त हामी भगवानको दर्जा दिन्छौ तर विडम्बना भगवानले नै बलात्कार गरेपछि अब बाँकी के रह्यो । शिक्षाको पनि कम बलात्कार भए छैन । त्यो पनि दिनहुुँ बलात्कृत छ । त्यस्तै साहित्य किन पछि रहनु । साहित्य लेख्ने काम हुँदैन सिर्जना गर्ने हुुन्छ । अनि सिर्जना भनेको सामान्य मानिसको तुुलनामा उसको ओहदा माथि र भगवानसँग दाँजिन्छ ।
किनकी एउटा भगवान हो जो हरेक दिन नयाँ नयाँ चिज सिर्जना गर्ने गर्दछ, त्यसकारण भगवान जतिकै साहित्यकारलाई मानिन्छ । तर आजको दिनमा त झन् कलम समातेकाहरु जति बलात्कार गर्ने अरु कोही हुँुदैन । कलमको आडमा त झन् बलात्कार गरिरहन्छ ।
२७ सालको अनुुभवमा म आजसम्म जति शिक्षित मान्छेसँग पीडित छुु वा समस्यामा परेछुु त्यति अनपढसँग नहोला । अनपढभन्दा हजारौँ गुणा ठूूलो बलात्कारी शिक्षित मान्छे हुन्छ । त्यो शब्दको आडमा वाक्य र अनुुच्छेदमा अल्झाएर अरुको बलात्कार गरेको हुुन्छ ।
हाम्रो देशमा जति महिला हिंसा हत्या भएको छ त्यसको अधिकांश कारण मादक पदार्थ र नसा हो । नेपालमा जाँडरक्सीको उत्पादन बिक्रि वितरणमा कुुनै प्रतिबन्ध नलागेको रहेछ । सामान्य नियम कानुुन बनाए पनि लागुु गर्नुुको सट्टा कागजमै सीमित रहेको छ । जसको फलस्वरुप पुुरुषहरु अनावश्यक तरिकाले सेवन गरि घरमा दिनहुँु महिला हिंसा गरेको हुुन्छ । मधेशभन्दा बढी पहाडमा सौखले जाँड बनाउने र खाने प्रचलन रहेको देखिन्छ ।
कुुनै पनि चाँडपर्वमा वा खुसीको माहौल हुुँदा जाँड अनिवार्य हँुुदो रहेछ । घरमा पाहुुना गए भने स्वागतमा जाँड दिएरै स्वागत गरिन्छ । यो समस्या पहाडी भेगमा भएको देखिन्छ । हरेक घरमा होटेल र रक्सी पसल भएको कारण अधिकांश महिला हिंसा र बलात्कारको शिकार भएको हुुन्छ ।
आफ्नो सँस्कृति आफ्नै हिंसा र अभिशाप बनेको छ । तसर्थ यो समस्याको न्यूनीकरणका लागि सरकारदेखि आमजनतालाई आफै सुुधारको बाटो अपनाउनुु पर्र्र्दछ । नेपालमा लागूुपदार्थ बेचबिखनको नीति नियममा कडाई गर्नुु अति आवश्यक विषय हो ।समाजमा भएको दिनहँुु बलात्कार करणी वा महिला हिंसा जस्ता घटना २२ वर्षमा ३६ गुुणाले १७ गुुणाले बढ्यो भन्ने कुरा विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
पछिल्लो समयभन्दा धेरै बढे पनि मलाई चाँहि त्यस्तो लाग्दैन । यी सम्पूर्ण समस्या पहिला थिएन भन्ने छैन । किनकी महिलाको जीवन आजभन्दा ५० वर्ष पछाडि गएर हेर्दा अझ डरलाग्दा र पीडादायक जीवनशैली थियो । सानो उदाहरण हामी लिने हो भने सर्वप्रथम बहुुविवाह बन्द भइसकेको छ । आकल झुुकल कही अब हेर्न मिल्छ कसैको दुुईओटा श्रीमती । बरु इन्टरनेट र शिक्षा, जनचेतना, खुुल्ला विचारधाराको कमी थियो ।
जुुन कुुरा समाज बाहिर नआउँदै कुुरा दबिन्थ्यो तर आज त्यही कुुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमका कारण, खुल्ला विचारको कारण सम्पूर्ण आमजनता अगाडि आइरहेको छ । त्यसकारण हामीलाई लागेको छ कि दिनप्रति दिन यो महिला हिंसा, बलत्कार बढेको छ । घटना त्यस्तै पहिला अनेकौ ठूूला बडा जीम्दारीया शासन र ठकुुरीहरुले गर्दा अझ समाज विकृतिले गाँजिएको थियो ।
अब हेर्दा त्यस्ता हलिया प्रथा, नासो, सति प्रथा, जस्ता अनेकौ प्रथाहरुको समाजबाट जरो उख्लिसकेछ । हाम्रो नेपालका पहाड वा तराई जहाँ पनि कुुण्ठित समाज रहेको छ । महिलाको लागि जहाँ पनि हदबन्दी नै रहि रहयो । अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या जहाँ पनि दलित जात बढी पीडित र मर्कामा परेको देखिरहेको छ । हाम्रो समाजमा अहिले पनि कति ठाँउहरु छन् जो छुुवाछुुत जस्ता रुढिवादी सोचले ग्रसित छन् ।
जसको शिकार दलित जाति भएको छ । उनीहरुको समाजमा अहिले पनि कुुनै पहिचान र अस्तित्व समेत नरहेको देखिन्छ । ठूुला बडाहरु धनको रवाफमा बलात्कार गर्ने र पछि धनको लोभ देखाएर घटना मिलाउने, सँस्कृतिको आडमा, जातजाति न्यून भएको कारण, अशिक्षा, पहुुँचको कमीका कारण दिनहुँु हेपिएका छन् । समाज यस्ता सङ्कीर्ण सोचले जबसम्म जेलिरहन्छ तबसम्म हामी उन्नती गर्न सक्दैनौँ ।
हाम्रो सोचाई र सोचको गहिराई कुुन कोटीको छ त्यस्तै हाम्रो जीवनशैली रहेको हुुन्छ । तसर्थ हामीलाई आफ्नो सोचमा पहिला परिर्वतन ल्याई देशको विकास गरौँ । आजसम्म जे जति बलात्कार भएको छ, ती घटनाहरुलाई नियाल्दा ९९.९ प्रतिशत मानिस चिनजानको, आफन्त वा छिमेकी नै रहेका हुुन्छन् । आफ्ना बाल्यकालमै पूरुष ५–१५ प्रतिशत शोषित हुुन्छ भने १५–२५ प्रतिशत महिला बालबालिका शोषित हुुन्छन् । महिलालाई ३० प्रतिशत शोषण गर्ने घरभित्रकै मान्छे हुन्छ भने ६० प्रतिशत शोषण गर्ने मान्छे चिनेका आफ्ना आफन्त हुुन्छन् । १० प्रतिशत भने अपरिचित व्यक्तिहरु हुुन्छ । तसर्थ हामीहरुलाई मर्कामा पुु¥याउने व्यक्ति बाहिरको नभई छिमेकी र आफ्नै भएको कारण हामीलाई जोगिन अति आवश्यक रहेको छ ।
कला र साहित्यलाई समाजको ऐना मानिन्छ । जस्तो समाजको अवस्था हुुन्छ त्यस्तै कला र साहित्यमा दर्साइएको हुन्छ । सन् १९÷२० को दशकलाई हेर्ने हो भने चलचित्रमा मात्र आफन्तलाई कुुटपीट गर्ने, शोषण गर्ने, बहिनी, छोरीलाई बलात्कार गर्ने जस्ता मात्र घटनालाई समेटेर निर्माण गरिएको हुन्छ । त्यो समयको बच्चा त्यहीं घटना हेरेर परिपक्व हुन्छ जसको फलस्वरुप कलिलो उमेरदेखि बदलाको भाव मनमा बस्दछ । हेर्दार्हेदै मनोबल बलियो भएर जान्छ र पछि त्यस्तै नकारात्मक व्यवहार समाजमा पनि देखाउन थाल्छन् ।
यसरी हामी आफै बलात्कारी निर्माण गर्दैछौँ । अर्को जो नियम बनाएको हुुन्छ । त्यही व्यक्ति दुुईजिब्रे रहेको हुुन्छ, लेख्छ के बोल्छ के गर्छ केही । यस्ता मान्छे ठूूलो घातक रहेका हुन्छन् । देशमा कुनै पनि अपराध कम नहुुनुुको कारण के हो ? एउटै कारण, राष्ट्रको कानुूनी व्यवस्था अत्ति फितलो र लापरवाह रहनुु हो । जति पनि नीति नियम बनाए पनि कडाईको साथ लागुु नभएको कारण अपराधीले कानुुनलाई पैसाबाट खेलिने हातको खेल बुुझिसकेका छन् । अनि हुुन पनि सत्य त्यहि कुुरा हो ।
कानुुन त मलाई पनि मात्र कानुुन व्यवसाय बनेर सीमित भइसकेको लाग्छ । अपराधी यति कुुरा प्रष्ट तरिकाले बुुझिसकेको छ कि जे गरे नि पछि पैसा र सोर्सले छुुटि नै हाल्ने हो । कुुुुुुुुुुुुुुनै अपराधको उजुुरी गरे पनि यति तारिख माथि तारिख आउँछ की पीडित व्यक्ति नै मानसिक र आर्थिक अवस्थाले थाकी सक्छ । म त भन्छुु यो बलात्कार जस्तो अपराधको लागि नियम यस्तो बनोस् कि पीडितको स्वास्थ्यदेखि आदालतको न्यायसम्मको सम्पूर्ण खर्च अपराधी पक्षले बेहोरोस् । जबसम्म देशको कानुनी व्यवस्था सफा र कडाइको साथ लागुु हुँुदैन तबसम्म यो महिला हिंसा र हत्या कम हुने छैन । यस्ता समस्याहरुलाई छिटो भन्दा छिटो न्याय दिने कानुन बनाउनुु पर्छ ।
दुुर्भाग्य र लज्जास्पद कुुरा हो । जुुन राष्ट्रको राष्ट्रपति एउटा महिला हो, त्यो देशमै दिनहुुँ बलात्कार, महिला हिंसा र करणी भएका छन् । यो कुुर्सीमा बसेकाहरु, नीति नियम बनाउनेहरुलाई डर हुुँदोरहेछ कही आफ्नै छोरा, आफन्त परिहाल्यो भने फेरि गाह्रो होला । कति घटनामा त ठूूला नेता मन्त्रीकै आफन्तहरु रहेका हुन्छन् । तर यही हाल रही रहयो भने त्यो दिन दुुर छैन जब स्वयम् पीडित आफ्नो हातमा न्याय र कानुन समात्ने छन् । यसरी भयोे भने झन् देशको अवस्था भयाभह हुुनेछ । तसर्थ समयमा सरकारको ध्यान पुुगोस् ।
एउटा भनाई छ “मन के हारे हार, मन के जीते जीत” भनाईको अर्थ मनबाट हारे हाम्रो हार र मनबाट जिते जित निश्चित छ । त्यसकारण जहिले पनि दृढ मानसिकता भएर बाँच्नुु पर्दछ । दरिलो आँट लिएर जहाँ जे गरेपनि हामी सफल हुुनेछौँ । शारीरिक शक्ति लगभग सबैको समान नै रहेको हुुन्छ । फरक त मात्र मानसिक शक्तिको हुुन्छ । हाम्रो सोच्ने क्षमता आत्मविश्वास कस्तो छ त्यसमा भरपर्दछ । सब मनको खेल र भ्रम हुुन्छ । हामी महिला सधैँ मानसिक धरातलले दरिलो बनौँ, आँटिलो बनौँ । कोहीलाई आँट हुुने छैन बोल्न,े कोही फर्केर हेर्ने हिम्मत गर्ने छैन ।
मधेश प्रदेश र गजेन्द्र नारायण सिंह